ဟိုင်းကြီးကျွန်းကသခင်မ – Grab Love Story
ကျနော်ကတော့ အခိုင်းခံရဆုံးပေါ့ဗျာ…. ဒီလိုနဲ့ ကားဂိတ်ရောက်…နာရီကြည့်လိုက်တော့ ကားထွက်ဖို့ ၁နာရီနီးပါးလိုသေး…. ” အိုကေ လေ” ထုံးစံအတိုင်းအနီးနားက ဆိုင်တစ်ဆိုင်အမြန်လိုက်ရှာ ဂွပ် ဂွပ်!နဲ့ ဘီယာ၂ပုလင်းလောက်ကိုင်ပလိုက်တယ် ……. တက်ကြွတဲ့ ခြေလှမ်းများနဲ့ ကားပေါ်တက်.. ထိုင်ရမဲ့ခုံကို ရှာကြည့်လိုက်တယ် (နောက်ဆုံးခုံ ပြတင်းပေါက်ဖက်ပဲဟ စောစောက ဂိတ်မှာမေးလိုက်တာတော့ …) တွေ့ပီ.. ခုံနဲ့အတူ ကျနော်အံ့သြသွားတယ် ဘေးနားမှာကျတာက နီညိုရောင်ဝမ်းဆက်နဲ့ အမျိုးသမီးတျောက်.. အမငီး!လှလိုက်တာဏော် အသားလေးက မီးမှိန်၂အောက်မှာတောင်ဝင်းနေတာဗျ ၅စက္ကန့်လောက်ကြောင်ကြည့်နေမိတယ်… “ဘာလဲ”_ သူ့အသံကြားမှကျနော်သတိရတယ်. “ခင်ဗျာ” အော် ဟုတ်ကဲ့..ဟိုဘက်က ကျနော့ခုံပါအမ .. “လာ လာ”ဆိုပီး သူထပေးတယ် ..ပါးစပ်ကတော့ ပွစိပွစ်ိနဲ့ ကျနော်ကြားမိတာက.. “ဘယ်လိုကားဂိတ်လဲမသိဘူး ယောကျားလေးနဲ့ ခုံတူတူချပေးတယ်. ဘာညာနဲ့ပေါ့ဗျာ”
ခုံပေါ်ထိုင်ရင်း ဘေးကအလန်းလေးကို ခိုးကြည့်မိတော့…မျက်စိမှိတ်ပီး အိပ်နေပီ.. ကိုယ့်ဘဝကိုယ်တွေးမိတယ် ..အင်းး….လူပျိုဖော်ဝင်ကတည်းက မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းတွေ မြင်ရရင် ရင်ခုန်တယ်…ကျောင်းတက်တုန်းကဆို မိန်းခလေးအဆောင်တွေလျောက်လည် ..တန်းတွေမှာ လှန်းထားတဲ့ အဝတ်တွေ ပင်တီကအစ..မြင်ရင်မနေနိုင် ခိုးပီးနမ်းရတာကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့တာ ..တခါတလေဆို ခြေထောက်လေးတွေမှန်းပီးး သူတို့ဖိနပ်တွေပါ နမ်းမိဖူးခဲ့တာလဲအခါခါ…စိတ်ကူးတွေယဉ်နေခဲ့တာ အောင်ဘု…. အင်းး….မောလိုက်တာကွာ ဒီလိုနဲ့ဖုန်းလေးထုတ် မနေ့ညကမှဒေါင်းထားတဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေ ..နားကြပ်လေး တပ်….ကြည့်နေမိတယ်…
ဘယ်ချိန် အိပ်ပျော်သွားမှန်းမသိ လက်မောင်းတွေ ပေါင်တွေ ပူခနဲ့ဖြစ်သွားမှ လန့်နိုးလာခဲ့တယ် “ကဲဟာ ကဲဟာ..” ဆွဲဆိတ်ပီးး.မျက်တောင့်နီကြီးနဲ့ ကြည့်နေတာ ဘေးက အလန်းလေးး “ဗျာ” __ “ဗျာလုပ်မနေနဲ့ ရှင်ဘာလို့လာငိုက်နေတာလဲ ကျမအပေါ်…ဟမ်” “တောင်းပန်ပါတယ် အမကျနော်အိပ်ပျော်သွားလို့ပါ” . “ရှင်.ပါးကျိုးမယ်နော် စောက်ရှက်ပါကွဲသွားမယ်…ဘာမှတ်လဲ” “ဟုတ်.. ဟုတ်ကဲ့အမ မလုပ်ပါနဲ့..” ဒေါက်! နဖူးပါခပ်ပြင်းပြင်းတချက်ခေါက်လိုက်တယ် … အင်းး မဆိုးဘူး ဒီကောင်သေချာနေပီ …အစောကလဲ ငါအိပ်ပီထင်ပီး ဇာတ်ကားအဆန်း တွေကြည့်…ဖုန်းဖွင့်ပီးအိပ်ပျော်နေတာ အသာယူကြည့်မိရင်းး ငါလဲအဲ့ထဲကလို ငါ့ကိုစိတ်ဒဏ်ရာပေးခဲ့တဲ့ဘဲတွေကို လုပ်ပစ်ချင်လိုက်တာ စန္ဒီစိတ်ထဲတွေးနေမိတယ်လေ
အာ့နဲ့ ဒင်းကို ဆွဲဆိတ်ပလိုက်တာ …ဒီကောင့်ကို ရသလောက်တော့ လုပ်ကြည့်အုံးမှပါလေ.. ဟင်း ဟင်း… “နော်တခါဆို သေမယ်” “ဟုတ်အမ” သတိရလို့ ကျနော်လဲ လက်ထဲကဖုန်းကိုကြည့်မိတော့ မတွေ့ ဘေးဘယ်ညာရှာကြည့်လိုက်တော့..တွေ့ပြီ သူမထိုင်ခုံအောက်မှာ.. “ဖုန်းလေးတချက်လောက်.အမလို့လက်ညိုးထိုးပီးပြောလိုက်တယ်…. “ကွကိုယ်ယူပါလား လက်မပါဘူးလား.. ” ဗျာ! ဟုတ် အာ့ဆို ခြေထောက်လေးနဲနဲလောက် ” သူမအပေါ်ကို နည်းနည်းဟ ပေးသည်..အာ့နဲ့ကျနော် လှမ်းနှိုက်လိုက်သည် မရ..အာ့နဲ့ ခေါင်းပါတိုးလိုက်မှ မှီသွားတယ်..ပီးတော့.ကောက်ပီးပြန်အထ… နူးညံ့တဲ့ လေးလံမှုတစ်ခုကြောင့် ပြန်ထွက်မရ စောစောက အပေါ်တင်ထားတဲ့ သူမခြေထောက်က ဘယ်ချိန်ပြန်ကျလာမှန်းမသိ ..တဖက်က ကျနော့ခေါင်းပေါ်မှာ နောက်တဖက်က ကျနော့ ကျောကုန်းပေါ်မှာ အသေချာကိုဖိထားတာ ဟာ…ဒုက္ခပဲဟ…မကြာ၁၀စက္ကန့်လောက်နေတော့မှ ကြွလာလို့ အတင်းထွက်လာရတယ် ..တော်သေးတယ် လေဘးကလူတွေကလဲအိပ်နေလို့ဘူ့မှမမြင်..
“ဒီမယ်အမိ..ခင်ဗျားး တော်တော်လွန်ပီနော် ” “ဘာလွန်တာလဲ နင်စောစောက အိပ်နေတဲ့ ငါ့အောက်ထဲဝင်ကြည့်နေတာ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတယ် ငမူးး ပီးတော့ ကားပေါ်မှာ ငါ့ကို မဟုတ်တာလုပ်နေပါတယ်လို့ အော်လိုက်မှ ရဲစခန်းရောက်သွားမယ် ဘာမှတ်လဲ” “ဟာ အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ.. ကျနော်ထပ်ပီးတောင်းပန်ပါတယ်…” “မကျေနပ်ဘူး..နင့်ကို နင့်ဖုန်းထဲကကားတွေလဲကြည့်ပီးပီ နင်ဘာကောင်လဲငါသိတယ် နင့်ကိုငါအပြစ်ပေးမယ် အာ့မှကျေနပ်နိုင်မယ်- ရှင်းလား” “ဗျာ ဟုတ်! ဟုတ်ကဲ့အမ.” .ပြသနာပဲ ဘလိုလုပ်သိသွားတာမသိ… “နင် ခရီးဆုံးတဲ့ထိ ငါခိုင်းတာလုပ်ရမယ် ” “ဟုတ်..ကျနော်ဘာလုပ်ရမလဲ”… “ပြင်ဦးလွင် ကားနားတဲ့အချိန် နင့်အဟွာကို သားရည်ကွင်းနဲ့ ချည်ပီး ကားပေါ်ရောက်ရင်ငါ့ကိုပြ…လောလောဆယ် ငါခြေထောက်ညောင်းတယ်နင့်ပေါင်ပေါ်တင်မယ်ရလား.. ဘေးကလူလဲကြည့်ထားအုံး” “ဟုတ်..မမလေး” ပါးစပ်က ဘလို့ထွက်သွားမှန်းမသိ” နူးညံ့အိစက်နေတဲ့ ခြေထောက်တစ်စုံက ပေါင်ပေါ်ရောက်လာခဲ့တယ် ကျနော်လဲ အလိုက်သိ နှိပ်ပေးနေမိတယ်..
ဒီလိုနဲ့ ကားနားချိန် အိမ်သာထဲရောက်တော့ သူမခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်လာခဲ့လိုက်တယ် ကားပေါ်ရောက်တော့ … သူမကကြည့်ပီး ပီးတော့ လက်ထဲမှာကိုက်ထားတဲ့ စက္ကူညှပ်တဲ့ ကလစ်လေး၂ခုပေးပီး “နင့်နို့မှာ အခုညှပ်စမ်း”.. ညှပ်လဲပီးရော… “အင်း ဟုတ်ပီမဆိုးဘူးပဲ ငါလဲခုမှချွတ်လာခဲ့တာ နင့်ဇာတ်ကားထဲကအတိုင်း နင်ရှူချင်နာမလားး ရော့! ” ဟုဆိုကာ ချွေးဆို့နေတဲ့ ပင်တီအနက်ရောက်လေးကို ကျနော့လက်ခုပ်ထဲ ထည့်ပေးတယ်… ကျနော်လဲ အပြင်မှာခိုးသာနမ်းဖူးတာ တခါမှခုလိုမကြုံဖူးတော့ ရှက်နေတာပေါ့ စိတ်မရှည်ဘူးထင်ပါတယ် သူမကကျနော်လက်ကို ဇက်ကနဲကိုင်ပီးနှာခေါင်းဝကိုဖိထားလိုက်တယ် …အား..မွှေးလိုက်တာ ကမ္ဘာဦးအစက ဧရာမပန်းခင်းကြီးထဲရောက်သွား သလိုပဲ စိတ်ထဲမှာ. သူမအပေါ်ရိုကျိုးချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာခဲ့တာဘာကြောင့်လားး…ကျနော်လဲမသိတော့ . .
“နာလား မွှေးလားဟင်” .သူမက အသံညုညုလေးနဲ့မေးလိုက်တယ် .. “မွှေးပါတယ်”ပဲ ပြန်ဖြေမိတယ် အဲ့အချိန်… နောက်ဆို ငါ့ကို “သခင်မ”လို့ခေါ်… ကြားလား ကျွန်လေး ဟင်း ဟင်းး… ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါသခင်မ” အောက်က ငပဲကလဲ မတ်လာပီလေ.. ခစ် ခစ်” သူမကလှပစွာ ပြုံးရင်း သူမပိုက်ဆံအိပ်ထဲက တစ်ခု ထုတ်လိုက်တာက လက်ညိုးလောက်ရှိတဲ့ တုန်ခါစက်လေးး …. သူမက မာပီးတင်းနေတဲ့ ကျနော့ အစိတ်သားလေးက်ို တို့လိုက်တယ် … “ငိ အီး ဟီး ဟီး…” ဘေးလူတွေနဲ့မို့ အသံလဲမထွက်ရဲ သူမကတော့ ပြုံးပြီး တစ်ချောင်းလုံးကိုလိုက်တို့နေတယ်လေ…ကျနော့လက်တဖက်ကလဲ သူမဖင်အောက်ထဲမှာ လှုပ်မရ ညှပ်ထိုင်ထားတယ် တဖက်ကလဲကျနော့်နှာခေါင်းပေါ်မှာဆိုတော့ “အီး အား.–” ကြိတ်ပီးသာအော်နေမိတယ်… သူမကိုမြတ်နိုးပီးကြောက်တဲ့စိတ် သိမ်ငယ်စိတ်တွေနဲ့.. သိပ်မကြာဘူး ကျနော်လဲ အဲ့နေရာမှာတင် ထွက်ကျကုန်တာပေါ့ဗျာ… “ဟယ် ရွံလိုက်တာသုတ်စမ်း မြန်မြန်” ကျနော်လဲပါတဲ့တစ်ရှူးနဲ့ကဗျာကရာ သုတ်လိုက်ရတယ် … တော်သေးတယ် ကျနော်တို့ခုံဘေးက လူတွေ အိပ်နေကြလို့ပေါ့ဗျာ … ကျနော်လဲ သူကျေနပ်လောက်ပီထင်တာ တကယ်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးးး…. “ရပီ ငါ့ဘောင်းဘီ ပြန်ဝတ်ပေးစမ်း” ဆိုပီး ကျနော့ ပေါင်ပေါ်ခြေထောက်တင်လိုက်တယ် .. “ဟုတ် သခင်မ ” ကျနော်လဲ သူမထဘီအောက်ကနေ အသာလေး ပြန်ဝတ်ပေးလိုက်တယ်…
.နောက်တခါဆို ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ပီး ချွတ်ခိုင်းရမယ် ဒင်းကို ..(စန္ဒီစိတ်ထဲတွေးနေမိသည်) သူမကခနနေတော့မတ်တက်ရပ်လိုက်ပီး “နင့်မျက်ခွက်ကို ငါ့ထိုင်ကြည့်မလို့ ခေါင်းတင်လိုက်စမ်း ငါ့ခုံပေါ်. “ဟုတ်” ကျနော်လဲ ကျဉ်း၂ကျုပ်၂နဲ့ခုံကြားဝင်ထိုင်ပီး သူမခိုင်းတဲ့အတိုင်း နေပေးလိုက်တယ်…သူမက အသာလေးတက်ထိုင်နေတယ် …ရင်ဘတ်က နာတာရော ငပဲက တောင်ပီးနာကျင်နေတဲ့စိတ်တွေ အကုန်ပျောက်သွားတယ်…အဲ့ချိန်လေးမှာသူဘာလုပ်လုပ်ကျနော်ကျေနပ်နေမိပီလေ ဦးစီးအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စန္ဒီ ဒီတပတ် လားရှိုးအိမ်ခနခွင့်ပြန်ရင်းး ဘဝမကြုံစဖူး၊ လုပ်ချင်နေတာတွေနဲ့လဲကြုံနေရတော့ အရမ်းကိုကျေနပ်နေခဲ့တာပေါ့
ဂျင်းကောင်မျက်ခွက်ပေါ်ထိုင်ရင်းး နောက်ရက်တွေအတွက်ပါ အစီစဉ် တွေဆွဲနေလိုက်တယ်လေ.. “ရပီထေတာ့” သူမက ဖင်လေးကြွပေးတယ်… “နင့်အပြစ်တွေက မသေးဘူးး ဒီတော့ .. နင့်ဖုန်းကို ကဒ်ဖြုတ် ရော့ ဒီကီးပတ်ယူသွားဟုဆိုကာ ” သခင်မကဖုန်းစုတ်လေးတစ်ခုထုတ်ပေးတယ် ..ပီးတော့ ကျနော့ခေါင်းလေးကို သူမကလက်နဲ့ပွတ်ရင်း… “_ နင့်ဖုန်းထဲက ကားတွေငါကြည့်မလို့ ယူထားမယ် ဖုန်းပြန်လိုချင်ရင်တော့ စနေနေ့ည ၉နာရီ ငါ့ဆီလာရွေး ရှင်းလား” “ဟုတ်သခင်မ လာရွေးပါ့မယ်ခင်ဗျ …” “အေး ဒီလိုမှပေါ့”… “လိပ်စာက…. .••တိုက်နံပါတ်၁၄ အခန်း-၂ …—လမ်း ၊….–မြို့နယ် (လူတွေကတော့ဟိုင်းကြီးကျွန်း)လို့ခေါ်တယ် ငါ့တို့နေရာကို အဲ့နားရောက်ရင် ဒီဖုန်းကိုဆက်(၀၉—).. ရှင်းလား! “ဟုတ်” ဒီလိုနဲ့ ဂိတ်ဆုံးတော့ သူနဲ့ကျနော်ကိုယ်စီ ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ် …. ကျနော့စိတ်ထဲမှာ သဘက်ခါမှာရောက်တော့မဲ့ ဟိုင်းကြီးကျွန်းက”စနေနေ့ည၉နာရီ”ကို တွေးရင်းး….
တီလေးရယ် ဖြစ်ပါ့မလား တော်ကြာသမီးတို့ ပြေးပေါက်မှားနေမယ်.” “ဟဲ့ နင့်အဒေါ်အပျိုကြီး မပိုင်ပဲ ဘယ်လုပ်ဖူးလို့လဲ..နင်ရောသခင်မ မလုပ်ချင်ဘူးလား ပြောစမ်း ကောင်မ” “ဟီး လုပ်ချင်တာပါ့ သမီး ဂျပန်မှာ ကျောင်းတက်တုန်းကဆို သမီးသူငယ်ချင်း ယူကီစံတို့ စုပီးဝယ်ထားကြတဲ့ တိုက်ခန်းမှာ သွားလည်ရင်းး အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံဖူးတယ် အဲ့ကျမှသိတာ တီတီရ တနေကုန် သမီးသူငယ်ချင်းဒေက ကျွန်လုပ်ခိုင်းတာ သမီးတောင် အိမ်သာမအားလို့ဆိုပီး အဲ့ကောင်လေး ပါးစပ်ထဲ သေးပေါက်ထည့်ခဲ့တာ ခုထိမမေ့သေးဘူးး ဟိ ဟိ” “အယ်.. ညည်းလေးလဲ ဇကမသေးဘူးပဲ ခခ် ခခ်.” တူရီးနှစ်ယောက် ပြိုင်တူရယ်မိကြသည် …
“နန်းလုလုစံ” ___ ဂျပန်မှာကျောင်းတက်ရင်း မြန်မာပြည်က ဒေါ်လေးအိမ်ကို ခနပြန်လာသူ… တီလေးစန္ဒီရဲ့အမရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေး မာမီတို့က ဟိုမှာပဲအခြေချနေကြတာ စီးပွားရေးကတဖက်နဲ့ဆိုတော့ လိုက်မလာနိုင်ကြဖူးလေ ငယ်၂ထဲက ဂျပန်မှာနေခဲ့ရတော့ မြန်မာမလေးနဲ့တောင်မတူ ဆံပင်က အီမိုကေ၊ အရပ်က ၅ပေ ၆၊ ဘယ်ယောကျားမှလဲအထင်မကြီးတက် အသားရည်နဲ့ အလှကတော့ မေးစရာကိုမလို .. ကျောင်းတဖက်နဲ့ မော်ဒယ်လုပ်ငန်းတွေမှာတောင် ၀င်လုပ်နေသူ အခု တီလေးအိမ်မှာ သူအားကျနေတာ လုပ်ရတာတော့မှာဆိုတော့ အရမ်းကို ပျော်နေမိတာပေါ့
ဒီလိုနဲ့…. အင်း ချိန်းထားတဲ့ နာရီနီးလာပီ ဘာတွေဖြစ်အုံးမလဲမသိ အောင်ဘုတစ်ယောက် နီးစပ်ရာဆိုင်ကယ် ကယ်ရီလေးစီးပီး .. သူမပြောတဲ့ လိပ်စာအတိုင်းလာခဲ့လိုက်တယ်၊ ရှာမတွေ့ ဒါနဲ့ “ဟဲလို သခင်မ ကျနော်ရောက်နေပါပီ ခင်ဗျ၊ အိမ်ရှာမတွေ့လို့ပါ “ “အင်း.. ဟုတ်ပီ နင်အခု ဘယ်နေရာမှာလဲ..”. “ကျွန်တော် ဟိုင်းကြီးကျွန်း အ၀င်လမ်း..—-..မှာပါခင်ဗျ“၊ “အေး ငါလာခဲ့မယ် နင်အဲ့ကစောင့် အဲ့နေရာကနေတဖ၀ါးမှမခွာနဲ့ ကြားလား “ “ဟုတ် သခင်မ “…တီ ဖုန်းချသွားပီးမကြာ ၅မိနစ်လောက်နေတော့ လိမ္မော်ရောင် ဆလွန်းကားလေးတစ်စီး ကျနော့ဘေးနားလာရပ်တယ် သခင်မနဲ့အတူ ကောင်မလေးတစ်ယောက်လဲပါလာတယ်၊
“ စောက်သုံးကိုမကျဘူး နေရာတောင်တွေ့အောင်မရှာနိုင်ဘူး ဂယ်ပဲ တက်ကားပေါ်.” . ကျနော် နောက်ခန်းတံခါးကိုဖွင့်မည်အလုပ်… “ဟဲ့ နင့်ကို ဘသူကအဲ့မှာတက်ခိုင်းလို့လဲ နင့်နေရာကနောက်မှာ” ကားနောက်ဖုံးတံခါးလေး ပွင့်လာသည်…. “ဟုတ် သခင်မ “ ဆိုပြီး ကျွန်တော်လဲ အဲ့ထဲကပဲလိုက်ခဲ့လိုက်တယ်.. ရောက်ပါပီ သခင်မနေတဲ့တိုက်ခန်းက မြေညီထပ်မှာ ဘေးဘယ်ညာကြည့်မိတော့ အခန်းတိုင်းမှာထဘီတွေ စကပ်တွေ အတွင်းခံဒေ တိုးလို့တွဲလောင်းတွေ . တံခါးတွေလဲပိတ်ထားကြတယ် …အထီးဆိုလို့ အဆောင်ဘေးက ကျနော်တို့ကိုငေးကြည့်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်နဲ့ ကျနော်ပဲရှိမယ်ထင် … .နဲနဲတော့ကျောချမ်းသွားတာပေါ့ဗျာ စကားတစ်ခွန်း ၂ခွန်းလောက်ပြော ဖုန်းပေးပီး ပြန်လွှတ်မယ် ထင်ခဲ့တာ တကယ်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး အခန်းပေါက်လဲရောက်ရော ဟဲ့ လေးဘက်ထောက်ပီး ခွေးလိုလိုက်ဝင်ခဲ့ ငါ့ အိမ်ကိုများ အရက်ဆိုင်မှတ်နေသလား“ “ဟုတ် သခင်မ“ ” ဖိနပ်ချွတ်ပေးစမ်း ငါတို့ကို နေ့ခင်းထဲက တနေကုန် လျောက်သွားနေရတာ ပင်ပန်းနေပီ“ ကျနော်လဲ ဖိနပ်လေးတွေ တယုတယနဲ့ ချွတ်ပေးလိုက်တယ်
သခင်မက အနီရောင်ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ အပေါ်က အနီရောင်ဝမ်းဆက်လေး၊ သခင်မနဲ့ဘာတော်လဲမသိ ကောင်မလေးကတော့ အသားကလဲဖြူဆွတ်ပီး အနက်ရောင်စကပ်တိုလေးနဲ့ ဖိနပ်က အဖြူရောင်လေး ချွတ်ရတာနည်းနည်းခက်တယ် ကြိုးတွေနဲ့ဆိုတော့….. တနေကုန်သွားထားတာဖြစ်လောက်သည် ခြေထောက်လေးတွေက ချွေးလေးတွေထွက်ပီး နွေးနေတာ… “ခခ် ခခ်.. လိမာလိုက်တာ တီလေးရာ.. ဘလိုတွေတောင်လား” “နင်ယုံပီမလား ကောင်မ ဟား ဟား ” “လာလိုက်ခဲ့ ကျွန်ကြီးရေ” ဆိုပီး သူမတို့က ဧည့်ခန်းထဲက ဆက်တီခုံတွေပေါ် သွားကြတယ် ကျနော်လဲလေးဘက်ထောက်ရင်းလိုက်သွားရင်း တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီလှနေတဲ့ သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ တင်အစုံကိုခိုးကြည့်မိလိုက်တော့ အရင်ဆုံးရလိုက်တာက ကိုယ်သင်းအနံ့လေးတွေ ပီးတော့…. အို…ကျနော့နှလုံးသားယမ်းခါကုန်ပီ မက်မောခြင်းတွေနဲ့အတူ “အ၀တ်စားတွေချွတ် တခုမှမကျန်စေနဲ့ ” “ဟုတ် သခင်မ” ကျနော်လဲခိုင်းတဲ့အတိုင်း ချွတ်လိုက်တယ် ရှက်လိုက်တာ…အဲ့လို မိန်းခလေးတစ်ယောက်အရှေ့ အဲ့လိုမနေဖူးတော့ ဒူးထောက်ပီးခေါင်းငုံထားရတာပေါ့ “ငါခိုင်းတာတွေလုပ်ပေးရင်တော့ နင့်ကိုလွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးမယ်၊ ဖုန်းလဲ ပြန်ပေးမယ် နင့်အတွက်လဲ အကျိုးမယုတ်စေရဘူး ဘလိုလဲ လက်ခံလား”___ “ဟုတ် လက်ခံပါတယ်ခင်ဗျ…
သခင်မကြိုက်တာသာလုပ်ပါ“ အောင်ဘုပါးစပ်ကလဲ ဘာတွေထွက်ကုန်လဲမသိ ခက်ပီ “အေး ဒါနဲ့ နင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ် ဒါငါ့တူမပဲ နင်ကသူ့က်ို မဖုရားလို့ ခေါ်ရမယ် လောလောဆယ် ငါတို့ဆီမှာ ခစားဖို့ခွင့်တောင်းစမ်း ခုချိန်ထိဘာမှ နားမလည် ဘူး ဟွန်း….” ကျနော်လဲ ခြေထောက်လေးတွေနား ခေါင်းလေးဝပ်ပီး “သခင်မနဲ့ မဖုရား ခြေတော်ရင်းမှာ ကျွန်ကြီးကို ခစားခွင့်ပြုပါခင်ဗျ” သခင်မခြေထောက်တစ်ဖက်က ကျနော့ခေါင်းလေးကို အသာပွတ်ရင်း “ကောင်းပီ”__ သခင်မရဲ့တူမလေားကပါ လိုက်တင်တယ်….. အဲ့အချိန်လေးမှာ အရာအားလုံးက လုံခြုံသွားသလိုပဲဗျာ အောင်ဘုစိတ်ထဲမှာ.. ကျနော့လည်ပင်းထက်မှာ တစ်စုံတစ်ခုရောက်လာသည် ကြိုးပါတဲ့ လည်ပတ်အနက်လေး… . .
လည်ပတ်ကြိုးလေးကို ကိုင်ပြီး သခင်မကမိန့်တယ် “အင်းလောလောဆယ် အချိန်ရှိသေးတယ် …. နင်ဒီညအိပ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့… အခု မီးဖိုခန်းထဲသွား ငါတို့စားထားတဲ့ ပန်းကန်တွေ အိုးတွေခွက်တွေ အကုန်ပြောင်အောင်ဆေး… အိမ်ထဲမှာ ငါတို့ခွင့်ပြုချက်မရရင်လေးဘက်ထောက်ပီးသွားရမယ် ကြားလား” “ဟုတ်ကဲ့ပါသခင်မ” ကျနော်လဲ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း မီးဖိုခန်းထဲသွား ဆေးစရာရှိတာတွေဆေး သိမ်းစရာရှိတာတွေပါ အကုန်သိမ်းပေးခဲ့လိုက်တယ်…. ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော်လဲ ဧည့်ခန်းထဲပြန်လာလိုက်တယ် သခင်မ၂ယောက်ကတော့ ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်ပီး တီဗီ ကြည့်နေကြတယ်လေ “ပီးသွားပါပီ သခင်မ” အနားမှာဒူးလေးထောက်ပီး ပြောလိုက်တယ် “အေး လိမာတယ် ခွေးလေးက” ဆိုပီး သခင်မက မတ်တက်ရပ်လိုက်ပီး ထမိန်ကိုလှန်လိုက်တယ် “ လာ ငါ့ဘောင်းဘီချွတ်ပေး တနေကုန်ဝတ်ထားတာဆိုတော့ ပူတောင်နေပီ ဟင်း ဟင်း” “ဟုတ်ကဲ့ ဆိုပီး ကျနော်လဲ ချွတ်ပေးမည်အပြု “ဟဲ့ နင့်လက်နဲ့ငါ့ ပင်တီနဲ့တန်လို့လား ကျွန်ကောင် ပါးစပ်နဲ့ချွတ်…. နောက်တခါမပြောရစေနဲ့” “ဟုတ် …ဟုတ်ကဲ့ပါသခင်မ ” ကျနော်လဲ ဒူးထောက်ရင်း ခက်ခက်ခဲခဲချွတ်လိုက်ရတယ် ဒါတောင် ပေါင်နားရောက်ခါနီး ပေါင်ကို ကားလိုက် စိလိုက်နဲ့ သူမကတော့ ခ် ခ်နဲ့ရယ်နေတာပေါ့ဗျာ တနေကုန်ဝတ်ထားတာဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ
လတ်ဆတ်တဲ့ သင်းရနံ့က အောက်ကငပဲကလဲ တင်းကနဲထလာတယ် အဲ့အချိန်… ပင်တီလေးပါးစပ်မှာကိုက်ထားပီး ဒူးထောက်နေတဲ့ ကျနော့ကို ၀ိုင်းရယ်နေကြရင်း “ဟဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလား ခေါင်းမှာစွပ်လေ” ဟုတ်ကဲ့ဆိုပီး ကျနော်လည်း ခေါင်းမှာစွပ်ချလိုက်တယ်… အဲ့တာကိုကြည့်ရင်း မဖုရားလဲ ပိပိလေးယားလာပီး အရည်လေးတွေတောင်ထွက်လာတယ် ကွကိုယ်ပဲ ချွတ်ချလိုက်ပီး အောင်ဘုပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်တယ်….. “၀ု ၀ု” ပင်တီ ၂ထည်နဲ့ အောင်ဘုစကားပြောမရတော့… “အင်း ခုမှ ခွေးနဲ့တကယ်တူသွားတာ ဟား ဟား ..” သခင်မက ပြောရင်းရယ်လိုက်သည် “နောက်တစ်ခုထပ်ခိုင်းမယ် ငါတို့ခန်းထဲမှာ အ၀တ်တောင်း၂ထောင်းရှိတယ် အဲ့တာယူပီးသွားလျော်ချေ ရေချိုးခန်းထဲ ” ”ဟုတ် သခင်မ” ဆိုပီးအခန်းထဲသွားလိုက်တာပေါ့ တွေ့ပါပီ အ၀တ်တောင်း တစ်ယောက်တစ်ခြင်းခွဲထားပုံပဲ တစ်ခြင်းက ယူနီဖောင်းတွေရော ည၀တ်အကျီတွေ နောက်တစ်ခြင်းကတော့ သခင်မ မဖုရားရဲ့အ၀တ်တွေနေမှာ စကပ်တိုတွေ ပင်တီလေးတွေ ရောင်စုံနဲ့ (ဂျင်) ဆော့ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေပါ ပါတယ်
နှစ်ယောက်စလုံးက ရေမွှေးအကောက်းစားသုံးတဲ့ပုံပါ့ အနံ့လေးတွေသင်းနေတာ ကျနော်လဲ မနေနိုင်တော့ပဲ အ၀တ်ပုံထဲ ခေါင်းစိုက်ရင်း ညီလေးကို လည်ပင်းညှစ်နေမ်ိတာပေါ့ ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ်မသိ သခင်မကဘေးနားမှာ ခါးထောက်ရင်းရောက်နေတယ် စိတ်တိုနေတဲ့ပုံပါ့ … “သေးပေါက်မလို့ အခန်းထဲဝင်လာတယ် ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ဟမ်! သူတောင်းစား နင့်ကို အနံ့ရှူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး လျော်ခိုင်းတာလေ..“ကဲဟာ ကဲဟာ”ဆိုပီး ၂ချက်ထပ်ကန်တယ်…. .“ တကတည်းမှပဲ သွား အချိန်မရှိဘူး မြန်မြန်လျော် ပင်တီဂွကြားတွေလဲ ပြောင်အောင်လျော်နော် .” ”၀ု ၀ု ” စကားကလဲပြောမရ.. ကျနော်အဲ့ချိန်မှာ သိမ်ငယ်စိတ်တွေနဲ့ သခင်မကို အရမ်းကြောက်သွားတယ် ပီးတော့ရေချိုးခန်းထဲဝင် အ၀တ်တွေ သေချာပြောင်အောင် လျော်ပေးလိုက်တယ်……
အကုန်လုံးပီးတဲ့အချိန်….သခင်မ၂ယောက်ဆီပြန်သွားတယ် အဲ့ချိန် သခင်မ၂ယောက်က (စပိူင်ပုလင်း) ကိုယ်စီသောက်ပီး စကားတွေပြောနေကြတယ်… “ပီးပါပီခင်ဗျ” “ အေး အာ့ဆို ဒီနားလာစမ်း နင့်ကို ခြေတင်ခုံလုပ်မလို့ ” “ ဟုတ်ကဲ့” သခင်မ၂ယောက်က လေးဘက်ကုန်းထားတဲ့ ကျနော့ကျောပေါ် ခြေထောက်တင်ထားလိုက်ကြတယ်…. “လိမာလိုက်တာတီလေးရယ် သမီးဂျပန်ကိုတောင် ခေါ်သွားချင်တယ် တီလေးခွေးကို ခခ် ခ် ” “ အေး နင်ကျွေးနိုင်ရင်ခေါ်သွားပေါ့ ဟား ဟား ….” “ အယ် ကျွေးတာကမခက်ပါဘူး တီလေးရ ဟိုမှာသမီးသူငယ်ချင်းတွေလဲအများကြီး ဒီကောင့်ကို ခိုင်းချင်တာခိုင်း ပီးရင် ဗကျွေးပီးမွေးထားမှာပေါ့ လွယ်လွယ်လေးကို ခ် ခ်” သူမတို့ပြောတာကြားရင်း အောင်ဘု ကျောချမ်းသွားပီးး သူမအပေါ် ပိုပီးရိုသေစိတ်တွေပေါက်သွားတယ် အဲ့အချိန်မှာ… “ဟဲ့အကောင် လိုက်မလား ငါနဲ့ ” ”ဟုတ် မဖုရား လိုက်ပါ့မယ်” “ နင့်လိုကောင်ကို ခေါ်မလား လကားပြောတာကို ခ် ခ်“ .. အဲ့လိုပြောပြန်တော့လဲ. စိတ်ထဲဘာလို့ဝမ်းနည်းသွားမိတယ် “ပက်လက်လှဲလိုက်စမ်း ကြမ်းပေါ်မှာ” “ဟုတ်ကဲ့” ကျနော်လဲ သူတို့၂ယောက် ခြေထောက်အောက်မှာ လှဲလိုက်တာပေါ့….“အေး ဘလိုလုပ်မလဲ….” “ အာ့ဆို သမီးလုပ်ပြမယ် ခန”ဆိုပီး မဖုရားက မီးဖိုချောင်ခန်းထဲဝင်သွားတယ် ပြန်ထွက်လာတော့ ကြိုးတစ်ခွေပါလာတယ်… နောက် ဖယောင်းတိုင်တွေရော ခြင်ရိုက်တဲ့ ဘတ်တံအသေးစားလေးရောပေါ့ ….. ပီးတော့ ကျနော့လက်နဲ့ ခြေထောက်တွေ မှာ ကြိုးဝိုင်းချည်ကြတယ်….
နောက်ဆုံး ပိုတဲ့ကြိုးစကိုတော့ ကျနော့ ငပဲမှာ ပတ်ချည်လိုက်ကြတယ်… ကျနော်လှုပ်မရတော့ “ရော့ တီလေးကဖယောင်းတိုင်ယူ … တကိုယ်လုံးကို အစက်ချ ဒါမှဒီကောင်မှတ်မှာ.”ဆိုပီး မဖုရားက ကျနော့်မျက်နှာပေါ်ထိုင်ချလိုက်တယ်… အသက်ရှူတော်တော်ကြပ်သွားတယ်ဗျာ အဲ့အချိန်…ဒါမဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့ အသံမထွက်ရဲဘူး .. “ ဖတ် ဖတ် ဖတ်“ ကျနော့် ငယ်ပါတော်တော်စပ်ပီးလန့်သွားတယ် .. မျက်နှာပေါ်ထိုင်ပီး ခြင်ရိုက်တံနဲ့ စိမ်ပြေနပြေရိုက်နေတာကိုးးး… တပြိုင်နက် ရင်ဘတ်ပေါ်နဲ့ ခနာကိုယ်အနံ့ကျလာတဲ့ ဖယောင်းစက်ရဲ့ အပူဒဏ်တွေ …. .“အား အု ၀ု ၀ု..” “မှတ်ပလားဟမ်.. … ဟား ဟား ဟား ” တွန့်လိမ်နေတဲ့ ကျနော့ကိုကြည့်ပီး သူမတို့၂ယောက် ပျော်နေကြတာပေါ့…. ပီးတော့ လူနေရာချိန်းပီး နေလိုက်ကြပြန်ရော….. ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ သူတို့ မောသွားလို့နေမှာ …ခုံမှာပြန်ထိုင်ကြရင်း ၀ိုင်ပြန်သောက်နေကြတယ်… ကျနော်ကတော့ မောတာအပြင် သူတို့ကို အရမ်းကြောက်နေပီလေ…. သခင်မ၂ယောက်တီးတိုးလေးပြောကြပီး … ကြိုးလာဖြည်ပေးကြတယ် ကျနော်လဲ ပီးလောက်ပီထင်တာ တကယ်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး…
“နောက်တခါ ငါတို့ခိုင်းတာ အကုန်အပိုးကျိုးအောင်လုပ်မှာလား ” “ဟုတ်ကဲ့ပါ သခင်မ လုပ်ပါ့မယ် သခင်မတို့ ချီးကျွေးရင်တောင်စားမဲ့ကျွန်ပါ” ငိ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဘာတွေဖြေမိနေမှန်း အောင်ဘုမသိတော့….. “ အေး အဲ့လိုမှပေါ့.. သေးတော့တိုက်မယ်ဟာ နင်ရေဆာနေပီမလား ” “ဟုတ်” မဖုရားက”အာ့ဆိုလာခဲ့ဆိုပီး ကျနော့လည်ပတ်ကို ဆွဲပီး သခင်မပေါင်ကြားထဲကို ခေါင်းထိုးထည့်လိုက်တယ်…. တီလေးကိုလည်း မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြရင်းပေါ့ …. “ငါတို့ တစ်ယောက်ကို နှစ်ခါစ်ီ ပီးအောင်ယက်ပေးစမ်း ပီးမှ ဆုချမယ် ငါတို့သေးကို..“ “ဟုတ်ကဲ့” အောင်ဘုမတက်နိုင်တော့ ဒီအချိန်ရောက်မှ မထူးတော့ဘူး ရေကလဲအရမ်းဆာနေပီ… လျာကိုအဆုံးထုတ်ပီး သခင်မရဲ့ ပိပိလေးထဲ မွှေနှောက်ပလိုက်တယ် အစိလေးကိုလဲ စုတ်ရင်းပေါ့ …… အထက်တန်းစား ရေမွှေးတွေနဲ့ လိုးရှင်း တွေ သုံးထားတာမို့ မွှေးကြိုင်နေတာပေါ့ဗျာ…..ကျနော်လည်း လျာက်ို ဒေါင်လိုက်ယက်လိုက် အလျားလိုက်ယက်လိုက်နဲ့ အချက်၆၀ လောက်အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်…
“ပြွှတ် ပြွှတ် ….ပလပ် ပလပ်…” “အား အားး ကောင်းလိုက်တာဟယ်…… အ့ အ့ သေချာယက်စမ်း အာ့ အာ့ ခွေးးသူတောင်းစားး ကျွန်စုတ် … အင်း အင်း အင်း….”. ဆိုပီး ကျနော့်ဆံပင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း သခင်မတကိုယ်လုံးတုန်သွားတယ်….. ကျနော့်ပါးစပ်ထဲလဲ အရည်တွေ ၀င်လာတာပေါ့ဗျာ …. “ ထွေးမထုတ်နဲ့နော် မျိုချစမ်း အကုန်လုံး” ကျနော်လည်း မျိုချပလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ… လာခဲ့ဆိုပီး မဖုရားက လည်ပတ်ကြိုးကို ဆွဲရင်းမတ်တပ်ရက်လိုက်တယ်… ခြေထောက်တစ်ဖက်က ခုံပေါ်တင်ထားရင်းပေါ့ ….. ကျနော်လဲ အလိုက်သိသိဒူးထောက် မျက်နှာမော့ပီး စကပ်အောက်က ပိပိလေးဆီ မျက်နှာအပ်လိုက်တယ်…. သူမကျတော့ ရေမွှေးနံ့နဲ့ ပိပိဝမှာ ထွက်စပြုနေတဲ့ အရည်ကြည်လေးတွေပေါင်းထားတော့ စိတ်ထဲမှာ ဂျပန်ပြည်က ပန်းခင်းကြီးထဲရောက်သွားသလိုပါ့….
“ယက်စမ်း ငါ့စပတ်ကို.. နင့်လျာနဲ့ထိုးထည့်ပီး သေချာယက်.. ခွေးလိုကောင်..” ကျနော်လဲ အမိန့်ရတာနဲ့ တယုတယနဲ့ အဆက်မပြတ် ယက်ပေးလိုက်တာပေါ့… “ပြွှတ် ပလပ်…….ပလပ်…” “အား အား ကောင်းတယ် ကျွန်စုတ် ယက်စမ်း မြန်မြန်…အား အား….” “နင့်ပါးစပ်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ င့ါဖင်ဝကိုပါ စုတ်ပီးးယက်… ယက် အ့ အ့..” ကျနော်လဲ ဖင်ဝလေးပါယက်ပေးလိုက်တယ် ….. “ကောင်းတယ် … အား အား…..” မကြာ…သခင်မမဖုရား တုန်တက်လာပွးး ပီးသွားတယ် … .“.သောက်စမ်း ငါ့စောက်ရည်တွေ ကောင်းလား ဟဲ့ အကောင်” “ချို.. ချိုပါတယ် ခင်ဗျ” ဆိုပီး ကျနော်လဲ အငမ်းမရယက်ပီး မျိုချပလိုက်တယ်……. ပီးတော့ သခင်မကကျနော့ ခေါင်းကိုကိုင်ပီး မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို အထက်အောက် ပွတ်ပေးတယ်… “မှတ်ထား အဲ့တာအသားဖြူဆေးပဲ နင်နေ့တိုင်းအဲ့လို အပွတ်ခံရင် နင့်စောက်ခွက် တစ်ပတ်အတွင်း ဖြုလာလိမ့်မယ်” ပြောရင်းပွတ်ပေးနေတာ …. ကျနော့စိတ်ထဲမှာ မဖုရားကို အရမ်းတွေကျေးဇူးတင်မိနေတာပေါ့ဗျာ…. ပီးတော့ သခင်မက ကျနော့ကို ဆိုဖာပေါ်လှဲအိပ်ခိုင်းတယ်….
အမိန့်တိုင်း လှဲပီးချိန်မှာတော့ သခင်မကကျနော့ဗိုက်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တယ်…. .ဖြန်း ဖြန်း! ကျနော့ပါးကိုရိုက်ပီး “ဟစမ်း နင့်စောက်ပါးစပ်ကို” ဟလိုက်တော့ သခင်မ၂ယောက်လုံးက တံတွေးတွေဝိုင်းထွေးထည့်ကျတယ်…. ပီးတော့ သခင်မက ကျနော့မျက်နှာပေါ်တက်ထိုင်ပီး ယက်ခိုင်းပြန်တယ်….. အဲ့အချိန် မဖုရားက ခြင်ရိုက်တုတ်နဲ့ ကျနော့ရဲ့ အစွမ်းကုန်တောင်နေတဲ့ ငယ်ပါကို တဖြန်းဖြန်းရိုက်လိုက် ကျနော့ နို့သီးတွေနဲ့ ရင်ဘတ်တလျောက်ကို ဆွဲစိတ်လိုက် ကုတ်လိုက်နဲ့…ခနကြာတော့ မောသွားတယ်နဲ့တူပါတယ်…. ကျနော့ခေါင်းဘက်ကနေတက်လာပီးးး ကျနော့မျက်နှာပေါ်ကို လုပီးထိုင်တယ် ……အယက်ခံနေတဲ့ သခင်မကလဲဖယ်မပေးဘူးလေ….. “ဟဲ့ ရအောင်ယက်စမ်း ၂ယေက်စလုံးကို.. နင် အသက်ရှူဖို့တောင်မစဉ်းစားနဲ့ ” ကျနော်လဲ အတက်န်ိုင်ဆုံး တလှည့်စီ ယက်ပေးရတာပေါ့ဗျာ ….မျက်နှာပေါ်မှာတော့ သခင်မတွေရဲ့ ဖင်ဖွေးဖွေး၂ခု ကို အသက်ရှုကြပ်နေတဲ့ ကြားက လုပီးးယက်နေရတာ…… “ယက်စမ်း ယက်စမ်း ငါပီးတော့မယ်..”. “ ဖြန်း ဖြန်း! သခင်မကပြောရင်း ကျနော့ ငယ်ပါကို ဆတ်ခနဲ လှမ်းရိုက်ပြန်တယ်…. မကြာ သခင်မကအရင်ပီးသွားတယ်….
နောက်၅မိနစ်လောက်နေတော့ မဖုရားလဲပီးသွားတယ် ကျနော့ပါ့စပ်ပေါ်တင်…. ပီးတော့ကျနော့ကို ဆိုဖာပေါ်ကနေ ကန်ချလိုက်ကြတယ်….. “ဖူး မောတာအေ”… သခင်မ၂ယောက်လုံး မောသွားပုံ…. ကျနော်ကတော့ အောက်မှာခွေခွေလေးး…… ” ဆိုပီးးး သခင်မ၂ယောက်က သီချင်းလေး ညည်းးရင်း အ၀တ်စားတွေချွတ်နေကြတယ်… ရေချိုးမလို့ထင်ပါ့……. ကျနော်လဲအိမ်သာကိုသေချာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပီး ရေချိုးခန်းထဲ လိုက်သွားခဲ့တာပေါ့…. အမလေးး လှလိုက်တာ နတ်သမီးလေးတွေချိုးနေတဲ့ နတ်ရေကန်ထဲရောက်သွားသလိုပဲ ရင်ထဲမှာ … “ လာ ဒီနားကို ” ဆိုပီးး သူမတို့ ခြေထောက်နား လက်ညိုးထိုးပြတယ်… ခြေထောက်လေးတွေ အောက်မှာရေချိုးရတဲ့အရသာက ရေပူစမ်းမှာ ရေဆင်းစိမ်ပီး အကြောတွေပြေသွား သလိုပဲဗျ စောစောက နာကျင်တာတွေပါပျောက်သွားတယ် ……. ဆပ်ပြာတိုက်ပေးစမ်းဆိုလို့ ကျနော်လဲ သခင်မ၂ယောက်လုံးကို တယုတယနဲံ့ တကိုယ်လုံး နေရာလွတ်မကျန် တိုက်ပေးလိုက်တယ်…
သခင်မတွေက သူတို့ ခြေထောက်နဲ့ပိပိလေးတွေကို ဆပ်ပြာတွေပွတ် တိုက်ပေးတယ.်လေ… ရေချိုးပီးတော့ အိပ်ခန်းထဲသွား သခင်မ၂ယောက်လုံးကို ညအိပ်ဝတ်စုံလေးတွေ ၀တ်ပေးလိုက်တယ်… ပီးတော့ သခင်မက ကုတင်ပေါ်မှာလှဲလိုက်ပီးး “ငါတို့ ၂ယောက်ပင်ပန်းသွားပီ နှိပ်စမ်း ငါတို့အိပ်မှရပ်….. “ဟုတ်ကဲ့ သခင်မ ” ကျနော်လဲ အဲ့ကျမှနားရတော့တယ် ….ပင်ပန်းပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာအရမ်းကျေနပ်နေမိပီလေ… သခင်မ၂ယောက်အိပ်ပျော်သွားတော့ ခြေထောက်လေးတွေ နမ်းရင်း ဖက်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်… မှေးခနဲ သခင်မက နှိုးချိန်မှ လန့်နိုးလာတယ်…. “ဟဲ့အကာင် ထ ထ… မိုးလင်းတော့မယ် လူမမြင်ခင် နင့်ကို ပြန်ပို့ရအုံးမယ် ထ” “ဟုတ် သခင်မ” ဆိုပီး ကျနော်လဲ အ၀တ်စား ကပျာကယာဝတ်ပီးးး သခင်မကားပေါ် တက်လိုက်တယ်……
လူရှင်းတဲ့ နေရာလောက်ကျတော့ .. “ကဲ ရပီ ဆင်းတော့.. “နောက်တခါကျရင် ကွိုင်ဝယ်လာခဲ့ ငါ့ရုံးကသူငယ်ချင်းတွေပါ နင်ပြုစုရမယ် သူတို့ကအိမ်ထောင်သည် လီးငတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေ…နင့်ပါးစပ်နဲ့ပါကိုက်ထားပီး ပါလိုးပေးလို့ရအောင် လီးတုပါရှာခဲ့ချေ…. ရော့ ဒါကနင့်အတွက်” (အိုင်ဖုန်း ၁၁ လေးတစ်လုံး) ဒါငါ့ဆီမှာလဲပိုနေတာမို့ လက်ဆောင်ယူလိုက်တော့..နင့်ဖုန်းအစုတ်ကိုလဲ ကိုင်မနေနဲ့တော့.. ငါ့ကွယ်ရာမှာ ကျန်းမာရေးလဲဂရုစိုက်……. ဖုန်းကို အမြဲဖွင့်ထားနော် ငါလိုတဲ့အချိန် လှမ်းခေါ်မယ်ကြားလား… ရောက်လေရာအရပ်ကနေ ရောက်အောင်သာလာခဲ့ …. ” “ဟုတ် သခင်မ” ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ အလိုလို ဝမ်းနည်းလာမိတယ်ဗျ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော်သူမတို့နဲ့မခွဲချင်တော့ဘူး ဒီလိုနဲ့ ကျနော်လဲ အလုပ်ရှိရာမြို့လေးကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်…. ဒါပေမဲ့ စိတ်ကတော့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် …နေပြည်တော်က ဟိုင်းကြီးကျွန်းက သခင်မဆီမှာပေါ့ဗျာ…… .. .တစ်လလောက်ကြာတော့ …….. “တီ တီ တီ….” ဖုန်း သံ…. နံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့ ဟာ …ကျနော်မျှော်လင့်နေတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေး အရမ်းပျော်သွားတယ်လေ…. “ဟဲလို..သခင်မ အမိန့်ရှိပါခင်ဗျ ကျွန်ကြီးးပါ….” “အေး… အောင်ဘုရေ ငါပြောမယ်…လိုက်မှတ်.. မနက်ဖြန် အဲ့နေရာကို ရောက်အောင်လာခဲ့ လိပ်စာက….—–နော်” . . . . . (ပြီးပါပြီ)